Fitaizana – FJKM
Mpivady miombona andraikitra amin’ny fitaizana
AHOANA NY ATAO MBA HAMPAHOMBY NY FITAIZANA ATAO AMIN’NY ZANAKA?
Misy toetra maro ireto mety hanampy amin’ny fikolokoloana ny zanaka mba ho tsara rindra ny fitaizana satria betsaka ny Ray aman-dreny no sahirana ary ireo zanaka koa sahiran-tsaina amin’ny fitondran’ireo Ray aman-dreny.
Voalohany, meteza ho mpanampy fa tsy mpanara-maso ny zanaka, akaikezo ary ataovy izay fomba ahafahana miresaka amin’ny zanaka. Zaro amin’ny traikefa anananao Ray aman-dreny izy dia avelao hanapa-kevitra amin’ny fiainany, Mivavaha mba hananany fiainam-baovao. Aza sakanana izy raha maneho hevitra. Mila omena ny fitiavana tsy misy fepetra ny zanaka ary omena anjara asa ihany koa.
AHOANA NO ANDANJALANJANA NY HOE VADY-RAY-RENY EO ANATREHAN’NY ZANAKA SY NY VADINAO?
Jereo Ilay Ray any an-danitra ka araho ny toetrany (Deot 8:1-10). Apetraho amin’ny tokony ho izy ny fitaizana. Atsaharo ny fitongilanana ara-pitiavana. Asehoy fa miaina amin’ny fitiavana sy ny fiadanan’ny Tompo ianao.
AHOANA NO HANABEAZANA NY ZANAKA HO AMIN’NY FINOANA MARINA?
Toriana amin’ny zanaka ny filazantsara. Ambara tsotra sy mazava aminy ny fitiavan’Andriamanitra sy ny famonjeny. Anisan’ny fiarovana ho azy ny firesahana amin’ny zanaka. Mangataha amin’Andriamanitra mba hiaro azy ireo (Ezra 8:21-24). Omeo fiarovana mialoha izy (Sal 119:97-105).
Fadio ny manao moraly be fahantany ny zanaka. Tezao amin’ny fitiavana sy ny Soratra Masina ny zanaka. Henoy tsara izy rehefa miteny ary atolory am-pitiavana ny valim-panontaniana omena azy ireo ka atsaharo ny fikitakitana sy ny fibedibedesana foana. Tezao amin’ny fahamarinana sy kolokoloy amin’ny Soratra Masina sy ny fanabeazana madio ny zanaka, ary mangataha amin’Andriamanitra amin’ny fanampiany ny amin’ny fitaizana, fa tsy vita amin’ny herin’ny tena izany. Farany, meteza ho fitaratra ho an’ny zanaka (ohabolana 2:1-5), ary hafatra lehibe koa ho an’ny rehetra ny ao amin’ny
“Ny famaliana mora dia mampianina ny fahatezerana mafy, fa ny teny maharary mahatonga fahasosorana. Ny lelan’ny hendry mampiseho fahalalana tsara , fa ny vavan’ny adala miboiboika fahadalana. Ny mason’i Jehovah amin’izao rehetra izao, mijery ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. Ny teny malemy dia hazon’aina; fa ny vava ratsy mandratra ny fanahy”.
Nanangona Lahatriniavo RANDRIAMANANTENA